नेपालमा कोरोनाको खोप ल्याउन किन भयो ढिलाई ?
मुख्य पृष्ठपत्रपत्रिकामा आजनेपालमा कोरोनाको खोप ल्याउन किन भयो ढिलाई ?
विराटनगर । कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप आयातका लागि सरकारले कूटनीतिक र प्राविधिक तयारी तीव्र बनाएको बताए पनि खोप आउनेबारे अन्योल देखिएको छ । कोभ्याक्स वा निजी क्षेत्रमध्ये कसले अघि ल्याउने अझै अन्योल छ ।
उनले भने, ‘कुनै पनि आधिकारिक आयातकर्ता विभागले तोकेका कागजातसहित आयो भने भ्याक्सिन प्रयोगका लागि अनुमति प्रक्रिया अघि बढ्छ । तर निजी क्षेत्रबाट अहिलेसम्म निवेदन आएको छैन ।’ राजधानी दैनिकमा समाचार छ
खोप ढिलाई नेपाल